Media sosialy - Mampifandray ny banga | Martech Zone
Media sosialy - Mampifandray ny banga
Talata, Jolay 5, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Betsaka ny orinasa mandroso amin'ny fahasosorana noho izy ireo tsy nandray ny media sosialy ary matahotra sao tara loatra. Tiako ity Infographic ity amin'ny namana tsara, Jason Falls, satria manome ny fahitana ny tena fampiasana… ary ny zava-misy fa mbola betsaka ny fotoana ahafahan'ny orinasa mampiasa ny media sosialy hampitombo ny orinasany.
Izany dia… manomboka manomboka ho lany ny fotoana. Matahotra aho fa, afaka taona vitsivitsy, dia mety ho very ny tsenan'ny orinasa amin'ireo orinasa mpifaninana izay nandray ny haino aman-jery sosialy ho toy ny fomba hampiroboroboana sy hifaneraserana amin'ny vinan'izy ireo sy ny mpanjifany. Raha tsy mihetsika tsy ho ela ny orinasa dia ho hitany ao ambadiky ny mpifaninana aminy ireo orinasa ireo satria nitombo ny fahefany sy ny marika an-tserasera.
Araka ny nambaran'i Jason, ny fikambanany dia eo ampio ireo orinasa hanampina ny banga. Aza hadino ny manampy ny Fikarohana ny haino aman-jery sosialy amin'ny lisitry ny vakiteny mahafinaritra ary araho ny namako malalako Jason Falls ao amin'ny Twitter koa.